Si aad u diyaariso codsi wanaagsan oo IUT ah, waxaad u baahan tahay wakhti, fikir, iyo talo wanaagsan… Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad xoojiso faylkaaga adoo raacaya 4ta usbuuc ee moockan, qiyaasta 30 daqiiqo todobaadkii.
Waxaa loo qaabeeyey inay la qabsato dhammaan baahiyaha: waxaad naftaada ku qancin kartaa 30 daqiiqo usbuucii, ama waxaad ku qaadan kartaa waqti dheeraad ah halkaas; waxaad daawan kartaa oo kaliya fiidiyowyada oo ma samayn kartaa ama ma samayn kartaa hawlaha iyo su'aalaha la bixiyo; Waxaan u isticmaali karnaa si aan ugala hadalno forumyada musharaxiinta kale, ardayda horayba ugu jirtay IUT, ama xitaa su'aalo ku waydiino macalimiinta, kuwaas oo dhamaantood ka tirsan kooxdayada dhexdhexaadinta.
Marka la soo koobo, qof kastaa wuxuu ku samayn karaa koorsadiisa MOOC, oo wuxuu u isticmaali karaa sidii tabobar-dawaareed ama sidii JPO weyn.
Gelida IUT: koodhadhka kor loogu qaado faylkaaga Diisambar 17, 2021Tranquillus
READ Cilmi-nafsiga ee macallimiinta
horeEco, yaa, maxaa loogu talagalay?
socdaTababar ku saabsan waxbarashada sare